विशेष Archives - नमस्ते खबर
विशेष समाचार जस्तै पत्रपत्रिकामा छापिएको कार्टुन ,राशिफल
बेलायती सेनाको उच्च पदमा पुगे स्याङ्जाका खाम्चा
February 4, 2018 joes_limbu joes_limbu
बेलायती सेनाको उच्च पदमा पुगे स्याङ्जाका खाम्चा २१ माघ, काठमाडाैं । बेलायती सेनामा कार्यरत एक नेपाली उच्च अधिकृतमा पदोन्नति भएका छन् । बेलायती सेनाको उच्च अधिकृतमा कमै नेपालीहरु पुग्दै आइरहेकोमा टोल खाम्चा मगर छैटौं वरीयताको लेफ्टिनेन्ट कर्णेल बन्न सफल भएका हुन् । ५० वर्षीय खाम्ता स्याङ्जा शीरकोट, करादीमा जन्मिएका हुन् । बेलायती सेनामा नेपालीहरुले २ सय वर्षदेखि प्रवेश पाउँदै आएका भए उच्च पदमा कमै पुग्ने गरेका छन् । खाम्चा बेलायती सेनाको छैटौं वरीयतामा पुग्ने चौथो नेपाली हुन् । यसअघि लालबहादुर पुन, विजय राजत र यामबहादुर रानाले पनि यो पदमा पुग्ने…
तपाईं लाई विश्वास नलाक्नु सक्छ हेर्नुस् मृत्युको मुखमा पुगिसकेकी बालिकाको गाँजाले बचायो ज्यान ! अबस्य हेर्नुहोला र SHARE पनि गर्नुहोला !!!
तपाईं लाई विश्वास नलाक्नु सक्छ हेर्नुस् मृत्युको मुखमा पुगिसकेकी बालिकाको गाँजाले बचायो ज्यान ! अबस्य हेर्नुहोला र SHARE पनि गर्नुहोला !!! एजेन्सी। निकै असाधारण रोगका कारण मृत्युको मुखमा पुगिसकेकी अमेरिकाको एरिजोनाकी १२ वर्षकी एनालिस लुजानको ज्यान गाँजाले बचाएको छ । लुजान त्यतिबेला मृत्युको मुखमा पुगिसकेकी थिइन् जब उनलाई निकै दुर्लभ एपिलेप्सी सिन्ड्रोम नामको रोग लागेको थियो । यो रोगका कारण दिमागले ठिकसँग काम गर्दैन र लगातार बेहोसी तथा झट्काका कारण व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ १२ वर्षकी एनाजिस एक जिम्नास्टिक मिटमा थिइन् । यत्तिकैमा उनलाई उल्टी हुन थाल्यो र खुट्टाले काम गर्न…
प्रधानन्यायाधीशकी पत्नी भन्छिन्- गोविन्द केसीसँगै सडकमा आउन तयार छु
प्रधानन्यायाधीशकी पत्नी भन्छिन्- गोविन्द केसीसँगै सडकमा आउन तयार छु १० माघ, काठमाडौं । नेपाली समाजमा आजको दिनमा सबैभन्दा आलोचित व्यक्ति कोही छन् भने ती हुन् – प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली । र, सबैभन्दा बढी चर्चित कोही छन् भने उनी हुन्- डा. गोविन्द केसी । तर, यी दुईका बीचमा कहाँनेर छिन् प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीकी कान्छी श्रीमती वासन्ता गौतम पराजुली ? झट्ट हेर्दा सामान्य ग्रामीण महिलाजस्तै सरल देखिने वासन्ता गौतम नेपाल सरकारकी उपसचिव रहिछिन् (अनलाइनखबरले यसअघि उनलाई गृहिणी लेखेको थियो ।) मंगलबार बेलुका अन्तरवार्ताका लागि हामी बालुवाटारस्थित प्रधानन्यायाधीशनिवासमा पुग्दा उनी भर्खरै अख्तियार दुरुपयोग…
लिङ्देनले राप्रपा छोड्न सक्छन्?
December 15, 2017 namestekhabar
वाम गठबन्धनको समर्थनमा झापा-३ बाट विजयी राप्रपा नेता राजेन्द्र लिङ्देन एमाले प्रवेश गर्छन् भन्ने हल्ला व्यापक छ। संसदीय चुनावमा समानुपातिकतर्फ राप्रपाले सदर मतको तीन प्रतिशत कटाउन सकेन। त्यसैले उनी संसदमा स्वतन्त्र हैसियतमा रहने भएपछि यो हल्ला झनै व्यापक भएको हो। चुनाव प्रचारका क्रममा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले नै झापाका मतदातालाई सम्बोधन गर्दै लिङ्देनलाई दिएको भोट एमालेलाई नै दिएसरह हो भनेको थिए। राप्रपाले तीन प्रतिशत मत ल्याउन नसक्ने र त्यसपछि लिङ्देन एमाले छिर्ने आँकलनका आधारमा एमालेले लिङ्देनलाई सघाएको भन्ने तर्क गर्नेहरु धेरै छन्। यसपालिको चुनावमा एमालेको भोट पाएर जितेका लिङ्देनबाहेक राप्रपाले…
विशेष सबै समाचार